SOOMAALIYA: DHAAWACYO IYO DHIMASHO MUG LEH OO DHACAY IYADA OO UU WEERARKUNA SII SOCDO - MSF Gudaha Soomaaliya- Helitaanka daryeel Caafimaad
SOOMAALIYA: DHAAWACYO IYO DHIMASHO MUG LEH OO DHACAY IYADA OO UU WEERARKUNA SII SOCDO
28.02.2011 | Qeybta Guud
Iyada oo uu dagaal xooggan oo u dhexeeya ciidamada Dowladda Federaalka Ku-meel-gaarka ah iyo kooxo hubeysan uu ka socdo magaalo-madaxda dalka ee Muqdisho ayaa kooxaha caafimaadka ee Médecins Sans Frontières/Dhakhaatiirta Aan Xuduudda Lahayn ay daweynayaan dersinno dad dhaawacyo ba’an ay soo gaareen ah.
Tan iyo markii ciidanka Midowga Afrika uu 20kii Febraayo bilaabey weerar ka dhan ah barihii ay joogeen kooxaha mucaaradka ee koonfurta-bartamaha Soomaaliya, ayaa kooxaha caafimaadka ee MSF ee ka shaqeeya cusbitaalka weyn ee Dayniile, oo ah magaalo ku taalla duleedka magaalada Muqdisho, waxa ay daweeyeen dad ka badan 220 qof ilaa 28kii Febraayo, oo qaar badan oo ka mid ahi ay qabaan dhaawacyo ba’an oo k asoo gaarey dagaal.
Dadka dhaawaca ah waxaa ka mid ahaa 29 carruur ay da’doodu ka yar tahay 14 sano jir, iyo 43 haween ah oo dhammaantood qaba dhaawacyo ka soo gaarey qarax ama xabbad. Kooxda MSF ayaa sameysey 48 qalliin, oo ay ka mid ahaayeen 21 laparotomies (oo ah qallliin weyn oo lagu sameeyo uur ku jirta caloosha). Toban iyo siddeed qof ayaa dhintey muddo hal toddobaad gudaheeda ah.
Kooxda MSF, oo labaatan iyo afarta saacba shaqeynaya, ayaa ku khasbanaadey in ay teendhooyin ka taagaan barxadda cusbitaalka si ay u dhigaan bukaannada tiradoodu sii korodhey. Sahayda caafimaadka ayaa yaraatey waxaana la qorsheynayaa in si degdeg ah loo diro sahay kale.